Mafirimu 20 Achaita Kuti Ufunge Nezve Hupenyu, Rudo, Chokwadi, Uye Zvazvinoreva Kuva Munhu - Blog
Pane chimwe chinhu nezve mafirimu chinotinakidza. Kunyangwe tiri kuseka, kuchema, kufunga, kana musoro nekuchiva, isu tinotsvaga aya akakosha anotarisa magirazi kutiratidza nzvimbo yedu pasi.
Nakidzwa nerunyorwa urwu rwezvakanaka zvemabhaisikopo zvisikwa izvo zvinoumba, zvinotungamira, uye zvinoita kuti tide kuva kupfuura zvatiri. Ivo vanozoita zvechokwadi kuti iwe ufunge.
Hupenyu hwekunetseka. Hupenyu hunoshamisa. Inoseka, inokombamira, inokatyamadza, inotsamwisa, uye pakupedzisira inonyaradza.
Iwo mafirimu akanakisa ekutora hunhu husina kunaka hwehupenyu anoita zvese izvo zvinhu.
Mhedzisiro inogona kunge isiri yakajeka-yakatemwa, iyo script pane dzimwe nguva yakanyanya kugadziridzwa, vatambi vanozozvibata nenzira dzatingave tisina kumbofungidzira, asi isu tinoda aya mafirimu emoyo yavanopa mune inowanzo kusagadzikana nyika.
Zvese zvinhu mukana, kunyangwe patinoronga. Zvese zvinhu zvinoshamisa, kunyangwe patinochema.
Ko kana iwe ukagona kuve nechokwadi chekuti hupenyu pano neupenyu ipapo hunobuda zvishoma kupenya nekuda kwechimwe chinhu chawakaita? Ungazviita here?
Amelie , nemutungamiriri Jean-Pierre Jeunet, bhaisikopo rinonakidza remibvunzo pakati pekushamisika, iro rinosimbisa kuti nekuda kwekuti hupenyu hauna kutsvinda, hazvireve kuti hatigone kutsvagisa makona madiki acho.
Ridley Scott's 1982 adapta ya tahe Phillip K. Dick nyaya 'Do Androids Kurota kweMagetsi Makwai?' kufungisisa kwakajeka pane izvo zvinonzi kurarama.
Ihwo hupenyu here? Ndangariro? Iyi ngano yea androids uye vanhu vanozunza kumusoro kwekuti chii chinonzi hupenyu uye ndiani anotanga kuchirarama.
Willy Wonka & iyo Chocolate Fekitori
'Nyika yekufungidzira kwakachena'… uye zvakare imwe yehunhu husingaperi.
Kana iwe ukapihwa nezvose zvaungade, ungazoda zvimwe here?
Ndihwo hupenyu hwese here, kugara uchingogunun'una kuunganidza, kutora, kuba, kana kutora? Kuziva miganho ye 'kukwana' muhupenyu hwomunhu inogona kunge iri iyo mibairo yepamusoro.
Hupenyu, kufa, rudo, kurwadziwa, kupora, kuzvarwa patsva: iwo macircle ehupenyu angave pakati pevatumwa kana vanhuwo.
Wim Wenders's poetic vision parudo nekuzvipira firimu kune avo vanoda kuyeuka vachinzwa kukosheswa chero zvodii, zvinova izvo vazhinji vedu - kazhinji tisina mazwi ekutaura pang - anoda zvakanyanya.
Chii, kunze kwekudikanwa kwekubatana, chingaite kuti ngirozi ishuve kurasikirwa nemapapiro ayo erudo?
Dhairekitori Boaz Yakin's 1994 firimu inovhurika senge yemazuva ano Shakespearean kushanya du simba apo isu tichiteedzera hunyanzvi hwevechidiki vanomhanyisa zvinodhaka uye chess whiz 'Nyowani', wechidiki akangwara uye wilier kupfuura vese vakamupoteredza.
Iyo nyaya inobata pazvinhu zvehupenyu vazhinji vanoedza kuzviparadzanisa (rudzi, njere, kirasi, magumo), kuumba yega yega zvakakwana murwendo rwemukomana achikwira pamusoro pemisungo yehurombo.
mibvunzo inoita kuti ufunge zvakaoma
Kudanana kwakanaka hakusi hako nyaya yerudo yakanaka. Rudo runosviba.
Shakespeare anogona kunge akati rudo rwaisave rudo rwakachinja kana shanduko yasangana, asi mafirimu anotevera ari pano kupokana nerudo kusava chinhu asi shanduko, inotsvedza, isina kutsanangurwa shapeshifter.
Spike Lee's 1986 debut film (ikozvino yeNetflix yakateedzana) inopa bonde, rusununguko, uye zvemukati kuvimbika kune muoni muchimiro chaNola Darling, mukadzi anoziva zvaari kuda pabonde uye nemweya, kubva kuna iye waanozvida, uye anoziviswa kune avo vanofunga izvi zvinongowanikwa kubva kune imwechete sosi.
Eternal Sunshine yeMapfungwa Asina Ruvara
Kana iwe uchigona kudzima ndangariro yekuda mumwe munhu, iwe ungadaro? Uye ko kana munhu iyeye akamhanyira mukati mako zvakare?
Kune vazhinji vanogona kuita chero chinhu kukanganwa mumwe munhu wavaifunga kuti vaizoda nekusingaperi, vachishandura nyika kuita gwenga rerudo amnesia, asi kunyangwe tikakwesha zvakadii, dzimwe nzvimbo hadziuyi dzakachena.
“Pane mibvunzo mina chete yekukosha muhupenyu, Don Octavio. Chii chitsvene? Mudzimu unoitwa nezvei? Chii chakakosha kuraramira, uye chii chakakodzera kufira? Mhinduro kune yega yega yakafanana: rudo chete. ”
Paunofunga kuti ndiwe mudiwa mukurusa munyika, iwe unobvunza mibvunzo yakadai. Iwe unouya kune imwe mhinduro.
Ipapo unorasikirwa nemunhu mumwe chete wawafunga rudo rwehupenyu hwako. Mukaha wakadzika unovhura. Unowira mukati: unosara here kana kubuda zvakare?
Chinangwa: ratidza zvachose kuti 'rudo ndizvo zvese zvaunoda.'
Mhedzisiro: Shakespeare muRudo, bhaisikopo rinozivisa zvisina tsarukano kuti rudo hausi mugumo-zvese kuve-zvese zvinoitika mukutsvaira kunze kwezvimwe zvese zvinonetsa, uye kuti kuremekedza nekukudza mumwe wako - zvinhu zvakakosha zverudo - dzimwe nguva zvinoreva kusiya waunoda.
Kama Sutra: Rungano rweRudo
Nyika yepanyama inoita zvirevo zvemusoro. Kana ikapihwa pamusoro payo zvizere, zvepabonde zvinopindirana nehushu kuti uve huviri.
Iyi ndeimwe yemadrama akasvibira, akanaka, anomutsa iwe nemudiwa munogona kuve nemufaro wekutarisa… kunyangwe paine kudikanwa kwekumisa kashoma. Nezvikonzero.
5 Inofanirwa-Verenga Nhoroondo dzeNhoroondo Dzine Dzakadzika Hupenyu Zvidzidzo
20 Mibvunzo Inotekenyedza Uchafarira Kufunga Nezve
Hunhu hweKufunga Zvakadzika
Musayendisiti anoona kuti pfungwa ine simba rekushandura chokwadi mukati nekunze, bhiriji rakachinjwa nyika dzekuziva kubva pane kufunga kune fomu yemuviri.
Iyi yechinyakare kubva padanho raPaddy Chayefsky rine zita rimwe chete rinopa kuziva sesimba rezvisikwa senge nzira yekukusiya iwe uchisvika mukati memazuva anotevera.
Kubatana kwenguva, nzvimbo, uye kufunga kunotamba makore anopfuura mazana mashanu uye kuburikidza nehupenyu hwevanhu vakaparadzaniswa, kuratidza kukakavara kwehupenyu hwega kune anova ndiani (uye riini) munguva.
kuwana pamusoro pekupandukira muhukama
Zvekare, zvazvino uye zvenguva yemberi zvinoramba zviri mukutamba mune ino firimu rinopokana.
Ndiani-anotarisa mafomu anodiwa kuti ave nechokwadi chechokwadi chinoshanda nemazvo?
Mune ino yakasarudzika kubva kuna Terry Gilliam, imwe typo mumazita inokanda murume anonzi Buttle muhupenyu hwomushanduri anonzi Tuttle, achitungamira Bureaucrat akapiwa basa rekubvisa chikanganiso chekubatwa mune yechokwadi isinganetsi inova hutongi hwevanhu masystem.
Iyo Truman Ratidza
Pakatanga iyi, pfungwa yeicho chaicho inoratidza kutora hupenyu hwedu yaive yeruzivo. Zvinonakidza kuti hupenyu hunotevera hunyanzvi.
Iyo titular hunhu mune ino 1998 firimu inotarisana naJim Carrey anorarama hupenyu hwake hwese kubva paudiki kusvika mukukura mutaundi rekunyepedzera (risingazivikanwe kwaari) revatambi uye akavanzika makamera.
Kana zvese zvatinoita zvave, semuimbi David Byrne akaimba murwiyo Ngirozi , kushambadzira kweshanduro yedu pachedu, chii, chaizvo, ichokwadi?
Fungidziro inoshanda zvechokwadi here? Fungidziro inova yechokwadi here? Unyanzvi sekupona chishandiso ibwe rekubata reichi chinoshamisa chiitiko chemu cinematic.
Murume, ingwe, igwa rekuponesa, gungwa risingaperi. Ndiani anopona? Ndiani anonyepa ? Chii chaicho? Chero bedzi paine mumwe munhu wekutaura ngano, chokwadi chinofamba chichienda kumberi.
Pane Izvo Zvinoreva Kuva Munhu
Hazvishamise kuti mabhaisikopo anowanzo kuongorora hoko, matinji, uye magiya anoumba 'munhu' anowira pasi pechinofungidzirwa kana fungidziro yesainzi, uko, semuhupenyu chaihwo, fungidziro iri yekutanga uye inonyanya kukosha mutyairi wenyaya dzese.
Captain America: Wemauto Wemuchando
Chibayiro chakasarudzika munhu, uye zvakaoma kurova Captain America mukati Hondo Yemuchando kuenda zvese-kunze kunoponesa shamwari kunyangwe paakatengeswa nekuvhimwa nezvinhu zvemunyika yaakapika kuti achazvichengetedza, semuenzaniso wehunhu hwevanhu pakurwisa kutambudzika kukuru.
katatu h uye shawn michals
Chimwe chezvinhu zvekutanga zvaunofunga nezvacho kana iwe uchifunga kuti 'munhu' ndeyemhuri, uye mashoma mafirimu anotora masimba anotyisa emhuri zvirinani pane ichi chinyaradzo gem, asi ichi chinobata pane zvimwe zvakawanda.
Kana nyika isingachade magamba, chii chinozoitika chegamba? Kuzvikoshesa pamatanho akawanda hakuwanzo kubatwa zvinehunyanzvi senge mune iyi nyaya yemhuri yepamusoro inowana kutsika kwayo zvakare.
Vanhu ndivo vari pamusoro pechikafu. Tinodya zvese, uye tiri kugara tichitsvaga zvimwe.
Zvakanaka , Kubva kumutungamiriri Bong Joon-ho, anotora hubris dzevanhu kunze kwechikafu equation uye anovhura vateereri kumibvunzo nezvehukama pakati pevapapi nemhuka.
Kana isu tiri izvo zvatinodya, sei tichiwanzobuda munzira yedu yekuziva nemaune izvo zvatiri kudya?
Star Trek: Iyo Inofamba Mufananidzo
MuStar Trek zvakasikwa, vatorwa vanowanzo mira-ins kune chimwe chimiro chevanhu, hapana mumwe ane mukurumbira kupfuura Spock.
Uku kurapa kwekutanga kukuru pamutambo wepaterevhizheni wekare kwakabata vateereri nemubvunzo wakaratidzwa kuna Spock neuto rinenge rakaita seramwari raitsvaga mugadziri waro: “Izvi ndizvo zvese zvandiri here? Hapana chimwezve here? ”
Kune zvinhu zvishoma kupfuura zvevanhu pane kuyedza kubata kukura kweavo tarisiro.
Robhoti rakasurukirwa rinopedza makore mazana manomwe richichenesa marara epasi mushure mekunge vanhu, avo vakaita kuti nyika isagare, vaenda kune nyeredzi.
Imwe ongororo yekune imwe nyika isingazivi inotakura robhoti ichienda nayo muchadenga, uko inosanganazve nezvakaitika pavanhu: vanhu vane husimbe vanopedza hupenyu hwavo muzvigaro zvekusimudza, uye vane nzira dzekutanga dzekutaurirana ndeyezvikwangwani kunyangwe pavanenge vari imba imwechete.
Robhoti iri kuyedza kumutsa vanhu kubva mukufa kwayo. Izvi zvinokumbira iwo mubvunzo: Tichiri vanhu here kana michina ichiwedzera hunhu kupfuura zvatiri?
kuvimba sei zvakare mushure mekunyeperwa
kubvunza sei mukomana paumire pamusoro pemavara
iwe unogona here kuve neanopfuura mumwe chete wemweya muhupenyu